- သတင်း Rule
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Samsung ရဲ့ Galaxy အာလဖပြန်လည်သုံးသပ်: တိုက်ရိုက် iPhone ကို6ပြိုင်သူ” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com ကြာသပတေးနေ့ 11 စက်တင်ဘာလအပေါ်များအတွက် 2014 12.45 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Samsung ရဲ့အသစ်က Galaxy အာလဖ Android စမတ်ဖုန်းနောက်ဆုံးတော့တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီအရည်အသွေးမြင့်ဒီဇိုင်းနှင့်စိတ်ကူးအရည်အသွေးအလုပျနိုငျကွောငျးကိုပြသ, မေးခွန်းလောကအတွက်: အဘယ်ကြောင့်ထိုသို့ပြုမှယခုတိုင်အောင်စောင့်ဆိုင်း?
အဆိုပါ 4.7in က Galaxy အာလဖ devices များ Samsung ရဲ့ကြီးမားတဲ့အကွာအဝေးအတွင်းအသေးငယ်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စမတ်ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာ "ဒီဇိုင်း" စမတ်ဖုန်းအဖြစ် 5.1in Galaxy S5 ကိုအောက်မှာထိုင်, သေးငယ်တဲ့ခငျြတဲ့သူကလူများအတွက်, အတွက်ထုပ်ပိုးအားလုံးနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကိုရှိသည်ဖို့ရှိသည်မဟုတ်ပါဘူးပိုကောင်းဒီဇိုင်းစမတ်ဖုန်း. သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးကြောင်း Samsung ကတတ်၏ပုံကိုဖွင့်.
အဖြစ်မှန်ခုနှစ်တွင်၎င်း၏ပလပ်စတစ်ဆောက်လုပ်ရေးကျော်ဝေဖန်မှုများမှတုန့်ပြန်နေသူများကဖန်တီးသောသတ္တုကောင်များနှင့်က Samsung စမတ်ဖုန်းများ၏အကွာအဝေး၏ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ်. ဒုတိယသတ္တုစမတ်ဖုန်း 5.7in က Galaxy Note ကိုဖွစျလိမျ့မညျ 4, စက်တင်ဘာလသို့မဟုတ်အစောပိုင်းအောက်တိုဘာလရဲ့အဆုံးမှာလွှတ်ပေးရန်ကြောင့်.
အဆိုပါပရီမီယံသတ္တုဆောက်လုပ်ရေး Samsung ရဲ့ဒီဇိုင်းအဘို့ရှေ့ဆက်ကြီးမားတဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်. ဓါတ်ပုံ: ရှမွေလသည် Gibbs / The Guardian က
က Galaxy အာလဖအရှိဆုံးဆွဲဆောင်မှုစမတ်ဖုန်းကို Samsung ကို လုပ်. , အကောင်းဆုံးတည်ဆောက်ခဲ့သည်ဖြစ်ပါသည်. အတူသတ္တုနှစ်ဖက် chamfered အနားလက်၌ကြီးမြတ်ခံစားရနှင့်ပလပ်စတစ်ကျောတစ်နည်းနည်း texture အတွက်ကြောင်ရဲ့စကားကိုနားထောငျတူ feeling က soft-touch နဲ့အရည်အသွေးမြင့်ရှိပါတယ်.
ဒါဟာအစ 114g မှာအလွန်အလင်းဖြစ်၏ - သော 112g ကို iPhone 5S ထက် သာ. လေး 2G ရဲ့, 15အိုင်ဖုန်းထက်ပိုမိုပေါ့ပါးဂရမ်6အ 145g Galaxy S5 ကိုထက်နှင့် 31g ပေါ့ပါး. ဒါဟာခိုင်ခိုင်ခံ့ခံ့မှာအားလုံးကိုယ်ခန္ဓာ၌အဘယ်သူမျှမပေးမည်သို့မဟုတ်လှည့်ကွက်နှင့်အတူတည်ဆောက်.
အများဆုံး 5in ကို Android နဲ့ Windows Phone စမတ်ဖုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဖုန်း၏အသေးငယ်အရွယ်အစားကပိုမိုလွယ်ကူတယောက်လက်တော်၌ကျင်းပရန်နှင့်သုံးစွဲဖို့စေသည်.
အဆိုပါ 4.7in screen ကိုကောင်းသော contrast နဲ့ကျယ်ပြန့်ကြည့်ရှုထောင့်နှင့်အတူကြွယ်ဝသောနှင့်တက်ကြွအရောင်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာတစ် pixel သိပ်သည်းဆအတွက်ရရှိလာတဲ့တစ် 720p resolution ကိုရှိပါတယ် 312 လက်မအရွယ်ကတော့ pixels per (ppi). ဒါကြောင့်ဆက်ဆက်စာသားနဲ့ကြည့်ရှုဓာတ်ပုံများစာဖတ်ခြင်းသည်အချွန်ထက်နေ, ကသိသာလျော့နည်းပြတ်သားနှင့်အတူက Galaxy S5 ရဲ့ 5.1in 1080p မျက်နှာပြင်ထက် 432 ppi. နှိုင်းယှဉ်များအတွက် iPhone 5S ကိုတစ်ဦး 4in 326ppi မျက်နှာပြင်နှင့်အဝင်က iPhone ရှိပါတယ်6တစ်ဦး 4.7in 326ppi မျက်နှာပြင်.
ပြင်ပပတ်ပတ်လည်သတ္တုတီးဝိုင်းက iPhone ၏ဆင်တူသည် 4, ဒါပေမဲ့သတ္တုအနားနှင့်တစ်ဦးရဲ့အရည်အသွေးခံစား chamfered ဖြစ်ပါတယ်. ဓါတ်ပုံ: ရှမွေလသည် Gibbs / The Guardian က
Screen ကို: 4.7720p Super AMOLED အတွက်
processor: Samsung က Exynos5Octa-core processor ​​ကို
ရမ်: 2RAM ကို GB ကို
သိုလှောင်ခြင်း: 32GB ကို
ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ်: Android မှာ 4.4.4 "KitKat သို့"
ကင်မရာကို: 12လွှတ်တော်အမတ်နောက်ဘက်ကင်မရာက, 2.1အမတ် front-facing ကင်မရာကို
connectivity ကို: LTE ကို, ဝိုင်ဖိုင်, NFC ကို, ဘလူးတုသ် 4.0 BLE နှင့်အတူ, ယူအက်​​စ်ဘီ 2.0 နဲ့ GPS
ဒိုင်မန်းရှင်း: 132.4 x က 65.5 x က 6.7mm
အာဏာ Core ရှစ်
အဆိုပါအာလဖ Samsung ရဲ့ Exynos ကိုအသုံးပြုသည်5Octa-core processor ​​ကို, အရာလေးကပိုအစွမ်းထက် cores နဲ့ပေါင်းစပ်လေးနိမ့်အာဏာကို cores ရှိပါတယ်. သာလေး cores တစုံတယောက်မျှအချိန်တွင်အသုံးပြုကြသည်, ဂိမ်းကစားခြင်းသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်တူတောင်းဆိုတစ်ခုခုဘက်ထရီကယ်ဖို့လိုအပ်ပါသည်သည်အထိအသုံးပြုတဲ့အနိမ့်အာဏာကို cores နှင့်အတူ.
အဆိုပါဖုန်းကို snappy ခံစား, apps များသုံးနေပြီမရှိအရိပ်အမြွက်နှင့်အတူချက်ချင်း load ကြောင့်ကတ္တရာသုံးတူသူ့ကို graphically အထူးကြပ်မတ်ဂိမ်းမှတဆင့် blasting ကိုင်တွယ် 8 ပြဿနာမပါဘဲ.
အဆိုပါအာလဖသေးငယ်တဲ့ရှိပါတယ် 1,860 milliampere နာရီ (mAh ဘက်ထရီ) 2,800mAh ထက်ပိုကြီးတဲ့ဘက်ထရီနှင့်အတူ Samsung ရဲ့အခြားစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ဖုန်းများထက်ဘက်ထရီ. ဘက်ထရီအစိုင်အခဲအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. တနေ့ကြာ, စဉ်ဆက်မပြတ်တွန်းအားပေးတဲ့အီးမေးလ်နှင့်အတူ, Bluetooth ကိုကျော်ဂီတနားထောင်ခြင်း၏သုံးနာရီ, ကြည့်ရှုခြင်း၏နှစျနာရီနှင့် 30 ဂိမ်းကစားခြင်း၏မိနစ်. ဒါဟာညစဉ်ညတိုင်းတရားစွဲဆိုခံရဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်, သို့သော်. အဆိုပါ galaxy S5 ကို အ 2,800mAh ဘက်ထရီကိုအလားတူအသုံးပြုမှုအောက်မှာတာဝန်ခံမပါဘဲတစ်နေ့ကိုတဝက်ကြာရှည်နိုင်ပါတယ်နှင့်အတူ.
Samsung ရဲ့ Ultra Power Saving Mode ကို, အရာ Galaxy S5 ကိုချီးမွမ်းခဲ့သည်, ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်, features တွေကိုပိတ်ပစ်, အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်မျက်နှာပြင်လှည့်နှင့်တစ်ဦးသေးငယ်တဲ့လက်တဆုပ်စာမှမရရှိနိုင် apps များ၏အရေအတွက်ကန့်သတ်, သိသိသာသာရက်ပတ်လုံးအားဖြင့်ဘက်ထရီသက်တမ်းတိုးမြှင့်, အတူ 10% ပတ်ပတ်လည်စာရင်းဘက်ထရီ 24 standby နာရီ.
အများဆုံးအခြား Samsung ဖုန်းများနှင့်မတူဘဲအအာလဖ apps များအဘို့ built-in သိုလှောင်မှု 32GB ရှိပါတယ်, ဂိမ်းများ, ဂီတ, ဓါတ်ပုံများနှင့်ရုပ်ရှင်တွေ, ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ချဲ့ထွင်ဘို့အဘယ်သူမျှမ microSD card slot.
သင်နှင့်အတူအသက်ရှင်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်က Android ကို customisible
Samsung ရဲ့ TouchWiz Galaxy S5 ကိုအဖြစ်အာလဖအပေါ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်နှင့်အမြင်ကိုစူး. ဓါတ်ပုံ: ရှမွေလသည် Gibbs / The Guardian က
အဆိုပါအာလဖအဖြစ်စိတ်ကြိုက်အန်းဒရွိုက်၏တူညီသော version ကိုအသုံးပြုသည် Galaxy S5 ကို, ငါတူတိုင်ကြားချက်များ. TouchWiz အဖြစ်လူသိများ, အ customisible အပြီးသားကောင်းသောစံက Android အတှေ့အကွုံမှစုပြုံပြွတ်သိပ်ထည့်ပါ, Google ရဲ့ built-in စကားသံကိုရှာဖွေရေးကဲ့သို့တူညီသောအလုပ်အကိုင်အများစုကိုလုပ်ဆောင်သော Samsung ရဲ့ S-Voice ကိုတူအတွေ့အကြုံတွေကိုပွား, နှင့်ပရီမီယံကိုကြည့်ထက်လျော့နည်းရှိပါတယ်.
Samsung ရဲ့အကြှနျုပျ၏မဂ္ဂဇင်းလူမှုရေးသတင်း app ကို, အရာလက်ဝဲဘက်ပိုရောက်အိမ်တွင်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာထိုင်နှင့် Flipboard App က powered ဖြစ်ပါတယ်, နှေးနှေးနှင့်အများဆုံးအဘို့အလှည့်-off. အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏နေအိမ်ဖန်သားပြင်ကနေဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်.
တချို့က Samsung ကပရိတ်သတ်တွေ TouchWiz ခစျြလိမျ့မညျနှင့်ရှေ့မှာ Android ဖုန်းအသုံးပြုတဲ့သူမည်သူမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်ကိုမည်သို့သိကြလိမ့်မည်. ထိုအပေါ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ Ultra Power Saving Mode ကိုတူသောအနည်းငယ်ကောင်းသောဖြည့်စွက်ရှိပါတယ်.
အဆိုပါလက်ဗွေစကင်နာတစ်ဦးကိုလက်ညှိုးတစ်ဦးပွတ်ဆွဲနှင့်အတူဖုန်းကိုသော့ဖွင့်. ဓါတ်ပုံ: ရှမွေလသည် Gibbs / The Guardian က
က Galaxy အာလဖ Galaxy S5 နဲ့မှတ်စုအဖြစ် home button ကိုအောက်မှာအတူတူပင်ပွတ်ဆွဲ-ကျော်လက်ဗွေစကင်နာရှိပါတယ် 4. Samsung ကတိုးတက်လာအချိန်အများကြီးသုံးစွဲခဲ့ပြီးခြားနားချက်သိသာသည်. သုံးသီးခြားလက်ချောင်းကိုသင်မှတ်ပုံတင်နိုင်, ဒါပေမယ့်အသီးအသီးကိုလက်ညှိုးနှင့်သင်တို့သည်လည်းတခုဆက်စပ်လက်မမှတ်တမ်းတင်နိုင်, လူအများစုကဖုန်းကိုသော့ဖွင့်ဖို့ကိုသုံးပါလိမ့်မည်ဂဏန်းရာဖြစ်ပါသည်.
အဆိုပါလက်ဗွေစကင်နာထက်ပိုပြီးတစ်ဦးရဲ့အောင်မြင်မှုနှုန်းမှာရှိပါတယ် 95% ကျွန်တော့်အတွက်, ဒါကြောင့်ဖုန်းကိုသော့ဖွင့်သို့မဟုတ် PayPal ကနှင့်အခြားသူများအားဖြင့်တစ်ဦးဝယ်ယူစစ်မှန်ကြောင်းသက်သေပြတဲ့အသုံးဝင်သောနှင့်အဆင်ပြေလမ်းအောင်. အဆိုပါတိုးတက်မှုမကြာသေးမီကမှငါ့လက်ချောင်းပွတ်ဆွဲအောင်မြင်မှုနှုန်းကိုမြှင့်တင်တဲ့ software ကို update ကိုမှတဆင့် Galaxy S5 ကိုမှတွန်းခဲ့ကြ 75% အထက်ဖို့ 95%.
တစ်ဦး optical နှလုံးခုန်နှုန်းအာရုံခံကိရိယာနောက်ကျောအပေါ်ကင်မရာကိုဘေးမှာရှိပါတယ်. ဒါဟာဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်တယ်, Samsung ရဲ့ S ကိုကနျြးမာရေး app ကိုသို့ data တွေကိုအစာကျွေး, ဒါပေမယ့်ငါကလူအများစုအတွက်အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်ရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. unconvinced ရယ်.
အဆိုပါနှလုံးခုန်နှုန်းအာရုံခံကိရိယာနေသော Flash နှင့်အတူကင်မရာ၏လက်ဝဲမှထိုင်. ဓါတ်ပုံ: ရှမွေလသည် Gibbs / The Guardian က
အဆိုပါ 12-megapixel ကင်မရာဆင်း Galaxy S5 ကိုအတွက် 16-megapixel ကင်မရာကနေခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်နေဆဲကောင်းသောအရောင်ရွှဲနှင့်အတူအစိုင်အခဲကကင်မရာဖြစ်ပါတယ်, ကြည်လင်ပြတ်သားစွာအသေးစိတ်များနှင့်အစာရှောင် Auto-focus. ကောင်းသောအလင်းရောင်အခြေအနေများအတွက်ဓါတ်ပုံများအလွန်ကြီးစွာသောကြည့်ရှု, မျက်နှာပြင်၏အရွယ်အစားထက်ကျော်လွန်သည်လည်းကျယ်ဝန်းသည့်အခါအနိမ့်အလင်းအဆင့်ဆင့်အတွက်ရိုက်ယူခဲ့သည်သူတို့အားနည်းနည်း grainy ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်.
က Galaxy အာလဖအလားတူ Galaxy S5 ကိုမှစျေးနှုန်းလိမ့်မည်, ကနေမိုဘိုင်းဖုန်းကိုစာချုပ်မပါဘဲပတ်ပတ်လည်£ 500 များအတွက်ရရှိနိုင် 12 စက်တင်ဘာလ.
ထူးအိမ်သင်, အလင်းနှင့်သတ္တုအနား. ဓါတ်ပုံ: ရှမွေလသည် Gibbs / The Guardian က
microSD card slot ၏မရှိခြင်းဘယ်လောက်ဂီတ hampers နေစဉ်ဖန်သားပြင် 1080p ဖန်သားပြင်နှင့်အတူဖုန်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသာလျော့နည်းချွန်ထက်သည်, ရုပ်ရှင်နှင့်ဓာတ်ပုံများကိုအသုံးပြုသူများကိုသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်, built-in သိုလှောင်မှု 32GB ရှိခြင်းနေသော်လည်း.
အဆိုပါအာလဖ Samsung ကအစဉ်အဆက်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီအကောင်းဆုံးအသေးငယ်စမတ်ဖုန်းများနှင့်လာမည့် iPhone ကိုမှအစိုင်အခဲပြိုင်ဘက်ဖြစ်ပါသည် 6, သောတူအရွယ်အစားမျက်နှာပြင်ရှိပါတယ်, အလားတူအလေးချိန်နှင့်အထူ.
အကောင်းအဆိုး: သတ္တုဘောင်, အစိုင်အခဲတည်ဆောက်, စူပါပါးလွှာ, လျောက်ပတ်သောကင်မရာကို, snappy စွမ်းဆောင်ရည်ကို, အားလုံးရက်ကြာဘက်ထရီသက်တမ်း, လွယ်ကူသောတလက်အသုံး
Cons: ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းထက်လျော့နည်းချွန်ထက် screen, အနိမ့်အလင်းကကင်မရာစွမ်းဆောင်ရည်ပိုကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်, အဘယ်သူမျှမ microSD card slot
• HTC One ကို M8 ကပြန်လည်သုံးသပ်: တစ်လျှပ်စီး-အမြန်, ကြယ်ငါးပွင့်ကိုဖုန်း
• Samsung က Galaxy S5 ကိုပြန်လည်သုံးသပ်: ပိုကြီး, ပိုမြန် - သို့သော်ပလပ်စတစ်
• Sony Xperia Z2 ပြန်လည်သုံးသပ်: အစွမ်းထက်, ရေစိုခံပေမယ့်သိပ်ကြီးမယ့်တစ်ဦး tad
• Google ၏ Nexus5ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: တစ်နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်အကွာအဝေး device ကိုကဲ့သို့တူညီသောကုန်ကျတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စမတ်ဖုန်း
• iPhone 5S ကိုပြန်လည်သုံးသပ်: Apple ရဲ့အကောင်းဆုံးအားလုံးလက်ဗွေရာနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲအကြောင်း
• Nokia က Lumia 930 ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: သို့သော်လည်းအကောင်းဆုံးက Windows Phone
အမှတဆင့် Published ဂါးဒီးယန်းသတင်းတင်ပုို့ plugin ကို WordPress ကိုများအတွက်.
← ယခင် Post မှ Next Post →